Biography ka Kate Winslet
UWatts Winslet ngumdlali owaziwayo emhlabeni. I-Biography Kate ithetha malunga nokuphumelela komsebenzi wakhe. Kwakhona, i-biography yeWinslet ichaza ngomntu wakhe onamandla kwaye oqhubekayo kunye nokukwazi ukuphumeza iinjongo zakhe. I-Biography Kate Winslet ibali leentombazana eyayifumana ebomini into ayifunayo.
Kwi-biography kaKate Winslet iqela lokuqala, ngokuqinisekileyo, ukuzalwa kwakhe. UKate wazalwa ngo-Oktobha 5, 1975. Intsapho yeWinslet yiNgesi. Ngenxa yoko, uK Kate wazalwa kwisixeko sokuFunda, esise-Berkshire. Abazali baseWinslet, uSally noRoger, babe ngabalingisi. Kodwa, umsebenzi wabo wawunjalo nje ngeyona ntombi. Ngoko ke, kwakufuneka basebenze ixesha elide lokutya iintsapho zabo. Cromie Kate, baneentombi ezimbini - uBeth noAna. Kwakhona, nabo babebandakanyeka ekusebenzeni, kodwa i-biography yooodade bakaKate ayikho into enomdla kwaye ayikhunjulwa. Kodwa i-biography yomdlali we-actress izalisekile nje ngeenkcukacha ezithakazelisayo.
UKate waqonda ngokukhawuleza ukuba wayefuna ukulandela ezinyathelweni zabazali bakhe baze bafezekise. Ngenxa yoko, sele sele eneminyaka elishumi elinanye, waqala ukubandakanyeka ekwenzeni kwesi sikolo, aphefumula ngo-1992. Kwaye eneminyaka elishumi elinambini intombazana sele ibonakala kwiikrini. Enyanisweni, ukuphumelela kwakhe kokuqala kwakukuphela kweentengiso, kodwa kwakusenokuba yimpumelelo encinane kumdlali wezobugcisa.
Ngowe-1990, intombazana ibuye kwakhona kwisikrini, kodwa, ngeli xesha, sele ikhona kwi-episodic indima kwinqaku. Emva koko wenza izinto ezahlukeneyo kwiminyaka emithathu. Kwakhona, uK Kate ubonakala kwinqanaba lezemidlalo - wenza indima kaWendy kumdlalo wezingane "uPeter Pen". Ukuba sithetha malunga nexesha likaKate athola umsebenzi wakhe wokuqala, kwenzeka ngo-1994. Kwakulo xesha, umlawuli uPeter Jackson wanika intombazana indima kwizinto ezivuyisayo "izidalwa zasezulwini." Kwiimvavanyo wazibonakalisa eyona nto ingcono yamantombazana angamanci asixhenxe anesithandathu aphengululi-ndlebe. Le filimu yaxatyiswa ngokugqithiseleyo njengempumelelo kakhulu, kunye nomdlali omncinci owamkela i-London Society ye-Film Critics Award.
Ngowe-1995, intombazana yayinenkwenkwezi kwi-film-story, kwaye yafumana indima kwi-melodrama "Isizathu kunye neemvakalelo." Kwaye emva kwalesi mfanekiso uzuko loqobo lwafika kwintombazana yaye wayenonyulwa ngenxa yesibhaso esibaluleke kakhulu se-cinematic - u-Oscar.
Kate uhlale evelisa ngamandla kubalingisi befilimu nabavelisi. Kweminye imifanekiso kuthathwe ngaphandle kokuphulaphula. Le ntombazana yayinenekhono kakhulu kwaye isinekhono. Kodwa, ngokuqinisekileyo, ibalulekileyo ebalulekileyo kwi-career kaWinslet yakuba ngumzuzu ekubethelwa kwiTitanic. Kwakukho, phantsi kolawulo lukaJacob Cameron, wadutshulwa ubuciko, eyayikhethwa kwi-Oscars elishumi elinanye. Ukudubula kule film kwakunzima kakhulu. Abadlali babefanele bachithe ixesha elide emanzini abandayo, kwaye ngaphandle koko kwakukho iingxaki ezaneleyo. Ukongezelela, indima edlalwa nguKate, yayininzi kunye nemvakalelo. Kwakudingeka ukwenza imizamo yokwenza abadlali babekholelwe othandweni oluvela ezinsukwini ezintathu kwaye bahlala entliziyweni yomntu ubomi. UKate wakwazi ukujamelana nayo yonke imisebenzi. Akazange adlale kuphela kakuhle kwaye akazange aphelelwe amandla ngenxa yokudubula okunzima. Le ntombazana yayisekela lakhe iqabane-uLelio DiCaprio. Emva koko wayemthanda uKate amaninzi, echaza indlela amnceda ngayo ukuba ajamelane njani, indlela awazama ngayo ukwenza konke ukuze akwazi ukudlala umdlalo. Ewe, uKate ungumntu ovakalelwa ngumntu oye wayethetha yonke into. Yaye yavuya kuLeo. Baye bakhonkcelelane kwinqanawa, bafumane into engayithandiyo, bayakhononda ngomnye kumanzi abandayo kunye neeshedyuli eziyinkimbinkimbi, baze baphume kwibala lokudlala ukuze yonke into ifotwe kwinqanaba lokuqala.
Emva kweTitanic, uKate waba yinkwenkwezi yangempela. Kodwa, akazange aphethwe yi "nkwenkwezi" yesifo kwaye akazange alandele iindleko ezinkulu. Intombazana yadutshulwa kuphela kwezo ifilimu ezazizithandayo. Wayesoloko ekhetha imisebenzi enomdla kunye nemifanekiso enokumkhuthaza.
Ubomi bakhe bomntu, ngo-1998 watshata nomphathi uJim Trippleton waza wazala intombi yakhe uMia ngo-2000. Ngelishwa, lo mntu akazange abe ngumthando wobomi bakhe, kwaye unyaka owodwa emva kokuzalwa komntwana, uKate wahlukanisa nomyeni wakhe.
Ngowe-1999, uKate wabhala kwifilimu ethi "iNdlu eNgcwele." Ngo-2000 - kwimifanekiso ethi "Perot Marquise de Sade", kunye nabadlali abadumileyo njengoJeffrey Rush, uJoaquin Phoenix noMichael Kane. Emva koko, umdlali we-actress wayezibandakanya kwi-voice acting of cartoons kwaye wadlala indima emitsha. Emva koko, uKate wadlala enye yeendima eziphambili kwifilimu ethi "Iris", eyazinikela kubomi bombhali u-Iris Murdoch. Umdlali we-actress utyunjwe kule nxaxheba ku-Oscar. Bonke abagxeki ngelizwi elilodwa bathi le ntombazana yayibheke kakhulu kwaye iyakholisa kwinxaxheba kaMurdoch.
Ngo-2002, ebomini bomntu kaKate, kukho utshintsho. Wathandana nomlawuli we-seme Mendoza, oye wafumana iimvakalelo zothando ngomdlali we-actress. Ngenxa yoko, ngo-2003 babetshatile kwaye busika babenonyana uJoe Alfie.
Ngaphezu koko, intombazana yaqhubeka ibonakala kwiifilimu kwaye enye yemifanekiso emihle yile minyaka elandelayo yayiyifilimu "ukukhanya okukhanyayo kwesizathu esicocekileyo". Isalathisi esingaqhelekanga kunye noJim Carrey ngendima ebalulekileyo ekudibanisene nokudlala okucacileyo ka Kate. Umfanekiso wawuphumelele kakhulu. UKate wabuyisela kwakhona ukhetho luka-Oscar kwakhona, kwaye, ngaphezu koko, wakhethwa "uBafta" kunye ne "Golden Globe".
Emva koko, umdlali wenkwenkwezi wayenenkwenkwezi emidlalweni emininzi, eyaphumelela kakhulu, ngeendlela ezininzi, ngenxa yokudlala umdlalo onomdlali omangalisayo.
Kuze kube namhlanje, uKeith uyaqhubeka ehamba ngeenkwenkwezi ezintsha. Unomama onwabileyo wabantwana ababini kwaye udutshulwa kwi-series "Mildred Pierce." Uhamba kwiikrini ngo-2011 kwaye uK Kate wenza inxaxheba ephambili kuyo, okuyiyo, ngokuqinisekileyo, ayikumangalisi. Umdlali onetalente, umama nomfazi omhle - oku kuchazwa ngu Kate. Kwakhona, ungumfazi wesiNgesi kunye nococekileyo onokuwunqoba ihlabathi ngobuhle, ubulumko, uphawu olucacileyo kunye neetalente.
USergei Lazarev ekwindla uza kuqala ukurekhoda i-albhamu entsha
Udokotela uDmitry Miller
Umbukeli weTV ophumelelayo uSlava Frolova
Ubuso benkampani "Avon" - uSalma Hayek
Biography kaLeonardo DiCaprio
UMaria Sharapova, i-biography
Izinwele ezomileyo: unyango kunye nokunakekelwa kakuhle
Indlela yokufunda ihlaya okanye iziseko zobungqina
Iimpazamo zokuzenza: indlela yokujongana nazo?
Isaladi ye-Shrimp kunye netamatato, iresidi yesaladi yoNyaka omtsha kunye nesithombe
I-carbon carbon monoxide
Njani kunye nantoni ukudweba ngamanqaku omnwe nomntwana
U-Alena Vodonaeva uhlambalaza uVera Brezhnev ngenxa yencwadana noMaledze, iinkcukacha
Uqhagamshelwano lwabazali abanomntwana oselula
Iqabane lam licinga ukuba akafanelekanga kum
Ziziphi izinto ezihamba phambili zokuhamba kwezivili zamasondo ezi-3 kwi-wheelchairs ezintathu: ukuhlaziywa kweempawu ezintathu
I-Horoscope ngo-Disemba 2017 - iSagittarius yabesifazane-ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Imiba ephambili yosuku olufanelekileyo
Amaqhawe amaninzi afanelekileyo abukele
Dessert nge yoghurt, i-plunes kunye ne-brandy